I-China Carbide Rotary Burr SD Shape -iBhola yeMilo yeBhola kunye nabathengisi | Xinhua
Carbide Rotary Burr SD Imilo -Ball Imilo
I-Carbide rotary burr ikwabizwa ngokuba yi-carbide high speed cutter, okanye i-carbide cutter cutter,
Ikakhulu kusetyenziswa processing yesinyithi kunye nomphezulu komhlaba burr wokucoca
1. I-carbide burr ingasetyenziselwa ukugqiba iintlobo ezahlukeneyo zesinyithi sokubumba;
2. I-carbide rotary burr icoca i-burrs, i-burrs kunye ne-welding ye-castings, i-forgings kunye ne-weldments;
3. Ukugqiba indawo engaphakathi yomngxunya wamalungu oomatshini;
4. I-carbide burr inokusetyenziswa kwizinto ezahlukeneyo zetsimbi kunye nezingezizo zesinyithi.
Uhlobo lweBhola eD Iifayile ze-D0303X03-35 3 13 3 38 X
Ikhonkco 4 13 4 41 X
Iifayile ze-D0605X03-38 6 5 3 43 X
Iifayile ze-D0605X06-45 6 5 6 50 X
Yixelwe 8 7 6 52 X
I-D1009X06-45 10 9 6 54 X
Q: Ndingafumana iisampulu zovavanyo?
Q: Yintoni na indlela yakho iwelding?
A: Isilver welding, Le yeyona ndlela iphambili yokuwelda yeemveliso ezikumgangatho ophezulu.
A: Sineenkcukacha eziqhelekileyo kwisitokhwe, iimpahla zesitokhwe iintsuku ezi-3. Iimveliso ezenzelwe wena, iintsuku ezingama-25.
Umbuzo: Ngaba ungazithengisela i-carbide burrs ngohlobo lwesuti?
A: Ewe, sineebhokisi zeplastiki ezisongekileyo, ii-5pcs / 8pcs / 10 iiifom zokupakisha ziyafumaneka
Q: Uqinisekisa njani umgangatho?
Ewe, sineenkonzo zokulandela umkhondo eziqinisekiswe ngumgangatho kwiimveliso ezithengisiweyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi. Uya kufumana inkonzo eyonelisayo emva kwentengiso ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Egqithileyo Carbide bokushicilela Burr SC Imilo -Cylinder Imilo kunye Radius End
Okulandelayo: Ikhabhayithi I-Rotary Burr SE Imilo-yeOval Shape
Carbide bokushicilela Burr SC Imilo -Cylinder Imilo wi ...
Carbide bokushicilela Burr SL Imilo -Taper Imilo nge ...
Ikhabhayithi yokuKhanya kweKhabhayithi yoBume beSH -Flamme Shape
Indawo engenanto yeCarbide yeCarbide Rotary Burr